महानगरपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण - Birat Sandesh
१ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेट
२ समाजसेवी गोयलद्वारा सर्लाहीमा साडी र कम्बल वितरण
३ महासंघ अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीको हैसियत दिलाएरै छाड्छु
४ उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा राउत निर्विरोध
५ झुठो अभियोग र लाञ्छना सहन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, उचित जवाफ दिन्छु
६ संसद्को हिउँदे अधिवेशन तयारी
७ युवाकवि शम्चुलाई मोहनलता साहित्य पुरस्कार
८ कोरोना अनुभवः दबाई पनि छैन लुक्ने ठाउँ पनि छैन
९ महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उद्योगी राउतको उम्मेदवारी
महानगरपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण
मंगलबार, कार्तिक ०४, २०७७ मा प्रकाशित
विराटनगर / कोभिड संक्रमितको उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विराटनगर महानगरपालिकाको पहल र युुएनडीपीको सहयोगमा प्रदेश–१ सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरले एक अनौपचारिक कार्यक्रमका गरी युएनडीपीको सहयोगमा आएको सामग्री प्रदेश नं. १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुली र युुएनडीपी प्रदेश–१ का प्रमुुख धनबहादुुर चन्दले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्दै जनताको स्वास्थ्य सेवामा थप सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
महानगरको समन्वयमा युुनएनडीपीले पिसिआर टेष्टमा प्रयोग हुुने अटोमेटिक आरएनए एक्सट्राक्सन मेसिन, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजन कन्सनट्रेटरलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । ७५ लाख मूल्य बराबरको तीनवटा स्वास्थ्य उपकरण प्रदेश ल्याब तथा कोभिड अस्पताल र विराटनगरको वैझनाथपुुरमा रहेको आइसोलेसन केन्द्रमा प्रयोगमा ल्याइने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री जिवन घिमिरेले विराटनगरस्थित कोभिड अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्न लागेको बताए । विराटनगर र धरानस्थित कोभिड अस्पताललाई थप विस्तार गर्दै जाने बताए । विराटनगरमा १५ वटा भेन्टिलेटर थप जडान गर्न लागेको मन्त्री घिमिरेले बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुुख भीम पराजुुलीले महानगरपालिकाले निजीस्तरको सहयोगमा अक्सिजनसहित एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको बताए । कोभिड रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रणका लागि महानगरपालिकाले सम्पुूर्ण शक्ति लगाइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत इन्द्रमणि पोखरेल, कोशी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुुपरिटेन्डेन्ट डा. चुुमनलाल दास, डा. दीपक सिग्देललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बिराटनगर खबर संग मिल्दोजुल्दो
समाजसेवी गोयलद्वारा सर्लाहीमा साडी र कम्बल वितरण
संसद्को हिउँदे अधिवेशन तयारी
युवाकवि शम्चुलाई मोहनलता साहित्य पुरस्कार
कोरोना अनुभवः दबाई पनि छैन लुक्ने ठाउँ पनि छैन
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेट
महासंघ अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीको हैसियत दिलाएरै छाड्छु
उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा राउत निर्विरोध
झुठो अभियोग र लाञ्छना सहन्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, उचित जवाफ दिन्छु